Home » Property (Page 4)
want to sell wide land at good place
Property, Property for Sale, Stuff for Sale | khin khin thu | March 18, 2014
The land located at exit of Taukkyant and entry of Hmawbi township . Sqft 5984 , and existing one well & edible plants & vegetables. We are owner of t...
လှိုင်ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး မာလာမြိုင်လမ်းကျယ် တိုက်ခန်း ပြင်ဆင်ပြီး
Property, Property for Sale, Shopping, Stuff for Sale | song | March 13, 2014
ရောင်းမည်။ တိုက်အသစ်၊ လူမနေသေး ၊ပါကေးခင်းပြီး အခန်း(၁)ခန်းဖွဲ့ ပြီး ဗိုလ်ထိုင်အိမ်သာ ရေမီးစုံ၊နေထိုင်ခွင့်ကျပြီး၊ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်။ဒုတိယထပ်
Free Business Listing, Property, Property for Sale, Stuff for Sale | gurugyi | March 11, 2014
အောင်ပန်းမြေကွက်ရောင်းရန် ပေ120x100 ပတ်လည်။ ပုံစံ(၁၀၅)ရှိပြီး။ အောင်ပန်း၊ကျောက်တောကုန်းရပ်ကွက်။ရှုခင်းကောင်း၊လေကောင်းလေ သန့်ရသည်။ သိန်း-၃၀၀